Iintyatyambo zangaphakathi: i-nidularium
Okunye I zityalo
Inani leentlobo zeNidularium ayikaziwa, kodwa ngokwemithombo eyahlukileyo, ubuncinane ubuninzi beentlobo ezingama-22 zifumaneka kwindalo, le nombolo sele ifikelele kwiintlobo ezisibhozo ezisibhozo zezityalo ze-epiphytic ezinikezelwe kwintsapho ye-bromeliad. Ezi zityalo zikhula eBrazil.
Igama livela kwi "nidus" (igama lesiLatini), ekuguquleleni lithetha isihla. Eli gama lifanelekileyo kulolu hlobo lwesityalo, kuba i-inflorescences ikhona ngaphakathi kwe-rosette. I-genus nidularium - i-herbaceous endless plants e-epiphytic. Amagqabi afumaneka kwi-rosette enesibindi se-goblet, eqhotyoshelweyo, eqinekileyo. Isityalo solu hlobo lwezityalo sisifutshane, ukunyuka kwe-inflorescence kukhula phakathi kwendawo ye-rosette ngendlela yentloko. Iintyatyambo ziyi-sessile, ezinkulu, zininzi; imibala yombala obomvu.
I-Nidularium inokukhula kwiingoma kunye nesimo sesityalo esinye. Ivakalelwa kakuhle kumagumbi amancinci kunye namafudumele, ngoko iyakhula kwiimeko zegumbi.
Iintyatyambo zangaphakathi ze-nidularium zikhula kakuhle ebusweni bokukhanya okuqhaqhaqhaqhakileyo, musa ukukhanya kwelanga. Kananjalo i-nidularium ikhula kakuhle kwi-penumbra okanye emthunzini opheleleyo, ngaphakathi kwendawo phantsi kokukhanya okuphantsi, kodwa ayiqhakazi. Indawo efanelekileyo yokuphila ngokuqhelekileyo kwesityalo isempuma okanye entshonalanga window. Ehlobo, isityalo kufuneka sibe shaded phakathi kwe-11: 00 ntambama no-5: 00 ntambama, ingakumbi ukuba ikhona kwiwindow eseningizimu. Kwifestile yenyakatho esenyakatho, isityalo sinokukhula kakuhle, kodwa kuphela xa kukho unyameko olufanelekileyo. Kule meko, isityalo asinakuqhakaza, kwaye umbala weqabunga liza kulubala.
Ekwindla nasebusika, isityalo sidinga ukukhanya okulungileyo, ukuthungqwa kwexesha elifanelekileyo kufuneka kususwe (ukuba bekuyiyo). Ukukhanyisa okulungileyo kudalwe izibane ze-fluorescent. Izibane zifakwa kumgama wama-30-50 cm ngaphezu kwesityalo, kulungele ukukhanyisa usuku ngeeyure eziyi-8 ngosuku.
Ngentwasahlobo, kunye nehlobo, iqondo lokushisa lomoya kufuneka libe kwigumbi lama-20-25 degrees, kuphela kwiimeko ezinjalo isityalo siya kuziva. Ebusika, ukuphumla, isityalo kufuneka sibekwe kwigumbi elipholileyo (malunga ne-15-18 o ). Iimeko ezikhuselekileyo ziyamkeleka nje ixesha elifutshane.
Ngexesha lohlaza (ngo-Matshi-Oktobha), iintyatyambo ze-nidularium kufuneka ziphuze ngokubanzi. Dlulisa ukhetheka kusasa - amanzi athululelwa kwimifuno yezisekelo. Ebusika, ukutyiliswa kufuneka kuncitshiswe kube ngamanzi okucoca, i-funnels ayidingi amanzi athululelwe (ukuba iqondo lokushisa eklasini, ngaphantsi kwama-degrees angama-20), kucetyiswa ukuba uphefle isityalo. Amanzi isityalo kunye namanzi athambileyo adibeneyo, anama-3 degrees ngaphezu kweqondo lokushisa. Ukuba isityalo sigcinwa ebusika ngo-20 о noS nangaphezulu, ngoko kwiziseko kuyimfuneko ukuthulula inani elincinci lamanzi afudumele, kuphela ekuseni.
I-Nidularium - iintyatyambo, ezinjengezinye i-bromeliads, zifana nokunyuka kwamanzi. Indawo efanelekileyo yokukhula i-wethouse okanye i-terrarium. Nciphisa isityalo eziliqela ngamaxesha. Ukwandisa umswakama kwi-pallet eneentshaba eziluhlaza, udongwe olwandisiweyo okanye i-moss, faka ibhodi ngesityalo, phantsi kwayo akufanele idibanise namanzi. Ixesha elizeleko licebise ukuba lisuswe ngamagqabantshintshi endwangu yamathambo, sebenzisa ngexesha elinye i-wax ayicebisi.
Ukutshala okufunekayo kufuneka kwenziwe ukususela ekupheleni kwentwasahlobo ukuya kuSeptemba ngenyanga. Ukugqoka okuphezulu kuyenziwa ngechumisi eyenzelwe ngokukhethekileyo i-bromeliads. Kuvumelekile ukusebenzisa ezinye izityalo kwizityalo zangaphakathi, kodwa nge-dose ye-50%. Ukondla kuyimfuneko emva kokutyilisa, ngenxa yale njongo isichumiso sifakwa kwi-rosette yamagqabi, anesimo esifana nesandi.
Umxholo we-nitrojeni kwisichumisi kufuneka ungabi ncinane, njengoko ukugqithisa kukukhokelela ekufeni kwe-nidularium. Ukutshintshwa kwezityalo kungaba yiminyaka emibili kwaye emva koko kuyimfuneko. Xa udilika, intamo yesityalo ayifuni ukungcwatyelwa, mhlawumbi isityalo siya kuqala ukubola kwaye ngenxa yoko siya kufa. Umhlaba ubhetele ukuthabatha. Igumbi kufuneka lixhotywe nge 1/3 yokuphakama kunye nomlambo olungileyo.
I-substrate yeentlobo ze-epiphytic: i-bark ephahliweyo yepine (izingxenye ezi-3), i-sphagnum ekhethiweyo (inxalenye engama-1), i-peat (1 inxalenye), umhlaba wephepha (i-1 part), i-humus (0.5 inxalenye). Kule ngqungquthela, kufuneka udibanise amaqhekeza amancinci kunye ne-perlite.
Ulwakhiwo lomhlaba lwezilwanyana zasemhlabeni: iindawo ezinamagqabi (iindawo ezi-2), i-humus ne-peat (inxalenye e-1) ne-0.5 iinxalenye zesanti. Kulo hlobo lwakongeza umhlaba we-sod, amalahle, i-sphagnum, i-bark yemithi ye-coniferous. Kungcono ukutshala kwisitya esikhulu okanye kungekhona izimbiza ezinzulu.
Ezi ntyatyambo zingaphandle ziphindaphinda zizaliswe, imbewu ingaphantsi kaninzi. Imbewu kufuneka ihlwayelwe kumxube wepeat nesanti okanye kwi-sphagnum encinci. Imbewu ngaphambi kokutyala kufuneka ihlanjwe kwisisombululo se-pinkish of permanganate, emva kokuma. Emva kokuba isidlo sifakwe kwigumbi elinokushisa kwama-22-24 degrees. Imbewu ehlwayelwe kufuneka ifakwe rhoqo, kwaye isakhiwo kufuneka siphume umoya. Amahlumela aboniswa ubuncinane iintsuku ezili-10 kamva, kwaye emva kweenyanga ezi-2, amahlumela kufuneka atshintshwe kwi-substrate enomhlaba we-sod (inxalenye yesibini), iinxalenye ezimbini zomhlaba weqabunga, i-peat (4 izingxenye). Izithombo zihlwayelwe emva kokuba zomelele, malunga nesiqingatha sonyaka. Izityalo ezincinane ziqala ukuqhakaza iminyaka eyi-3-4.
Olu hlobo lwesityalo lulula ukuvelisa inzala. Emva kokuqhakaza, isityalo siqala ukufa, ngelixa ngexesha elifanayo i-buds of renewal yenziwe kwisiseko, apho ininzi imbewu ivumelekile ukudubula. Emva kweenyanga ezimbalwa benza uhlobo lwempembelelo olubuthathaka kunye namaqabunga amathathu. Emva koko, kufuneka bahlukane ngokucokisekileyo kwaye badibaniswe kunye neengcambu baze badibaniswe kwisitya esine-sphagnum okanye ukubunjwa komhlaba okubandakanya iindawo ezi-3 zomhlaba weqabunga, inxalenye yesanti, kunye nelinye i-pine bark (inxalenye e-1). Ungathenga umgca owenziweyo owenziweyo owenzelwe i-bromide. Isikhundla sifakwa kwigumbi elifudumeleyo, apho izinga lokushisa lomoya li-26-28 degrees. Ikhonkxa ihlanganiswe ne-polyethylene okanye isilayi seglasi. Emva kokuba izityalo zixhomekeke kwaye ziqiniswe, kufuneka ukuba kuqwalaselwe njengomzekelo omdala.
Kwamaqabunga abonakala isithende sombala omdaka obomvu. Isizathu sitshisa ilanga - vele ulungelelanise isityalo kwindawo apho imisebe yelanga ingawa. Iingcebiso zamagqabantshintshi ziguqulwa. Isizathu somoya omile. Kule meko, ukupomfa kuyimfuneko, ngakumbi kwiintsuku ezitshisa zasehlobo. Ezinye izizathu: amanzi anzima okanye kwi-funnel akukho namanzi. Ukufa kwesityalo. Ukuba isityalo asikabaluli, ke isizathu sokuba i-substrate iqhubele phambili. Yaye ukuba isityalo sele sasiqhakazile - ukubola nokufa ngaphandle kwe-rosette.
Kuchaphazelekayo: i-mealybug, isikraba.
Iintyatyambo zangaphakathi: ipteris
Izityalo zangaphandle ze-chrysalidocarpus
Uncedo kangakanani umlotha womthi wezityalo?
Indlela yokukhulisa imon kwiimeko zasekhaya
Unokunyamekela njani iirase ekhaya?
Ukulima okufanelekileyo nokuveliswa kwamakhiwane ekhaya
Ukubuyiselwa kwenyanga emva kokubeletha
Ziziphi iimpahla ezilungileyo ze-beige?
Usulelo oluthe ngqo oluthile: i-tetanus
Yintoni iimboli ezinokuphupha ngazo?
Inkukhu ye-Chicken kunye nama-oranges
Burgers ngeeshizi kunye ne-horseradish
Ingakanani ukupheka amaqanda aphekiweyo
Imfihlelo yokuvisisana esuka ku-Sati Casanova: kulabo abangathandi ukuzivocavoca kunye nokutya
Iingcebiso kubafazi ukukhulisa ukuzithemba
Ukulimaza okanye ukusebenzisa i-solarium
Indlela yokupheka umntwana?
I-quile ye-pastry e-puff kunye neklabishi
UMama Kristen Stewart uyamxhasa intombi yakhe
Ngoko ndiyilungiselela isiFrentshi: umphumo uyamangalisa
I-Brussels ihluma kunye nama-mushroom
Inyolo yokulwa neetetus, i-diphtheria, ukukhwehlela